मन्त्री प्रेम आलेको कमाल « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
मन्त्री प्रेम आलेको कमाल
काण्डमा मुसिनु नेपालको केही दोष होइन । किनकि माटोको कहिल्यै दोष हुँदैन । यति चाहिँ बूझ्नु कि माटो जहिल्यै पनि निर्दोष हुन्छ । हामी बारबार सतीले सरापेको देश भनेर यो निर्दोष माटोलाई पखाल्न आवश्यक छैन भन्ने कुरा नै प्रस्ट रहेको छ ।
कुरा रह्यो काण्डको, काण्डमा बारबार मुसिएका मुद्धा भने आज मात्र होइन । धेरै वर्ष अगाडिबाट नै चलिआएका हुन् । फरक यति हो पहिले काण्ड चाडपर्वजस्तो कहिलेकाहीँ आउँथे आजकाल काण्ड एउटा सेलाउन नपाई अर्को आइपुग्छ ।
त्यसैगरी अहिलेको अवस्थामा नेपालमा चलेको चर्चित काण्ड नै बतास काण्ड रहेको छ । नारायणहिटी सङ्ग्रालयको क्षेत्रमा क्याफे बनाउने निणर्य बाहिरिएसँगै काण्ड पनि बतासकै झोँकामा बाहिरिएको छ । बतास अर्गनाइजेसनले निर्माण गरेको क्याफेको चौतर्फी बिरोध भएपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री प्रेम आलेको ठाडो निर्देशनमा काम रोकिएको छ ।
कसरी रोकियो बतास ?
आलेको मन्त्रालयले सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रै रेस्टुरेन्ट बनाउने काम तत्कालका लागि रोकेको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले बतास अर्गनाइजेसन अन्तरगतको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि संरचना निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । ‘‘सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारका कारण विवाद सृजना हुन गएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राको मौखिक आदेश बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य रोक्न हुन जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा भनिएको थियो ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीलाई पत्र काटेर काम रोक्न भनिएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नै अपारदर्शी तवरले भएको काम रोक्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । सस्तो भाडादरमा जग्गा हात पारेपछि दरबार संग्रहालय परिसर (गेटबाट पश्चिमपट्टी) भित्रै रेस्टुरेन्टका लागि गैरकानूनी ढंगले विभिन्न पक्की संरचना बनाउने र थप्ने काम भइरहेको थियो तर मन्त्रालयको निर्देशन पछि भने संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार रेस्टुरेन्टको भवन क्षेत्रको मात्रै टेन्डर गरेको समितिले अब थप क्षेत्र पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिने गरी संरचना बनाउन दिएको थियो । संरचनाहरूको नक्सा पास नै भएको छैन । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले दरबारभित्र संरचना थप गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति लिएको छैन ।
कानुअनुसार नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
समितिले पारदर्शी ढंगबाट जग्गाको टेन्डर गरे पनि टेबल कुर्सी रहने क्षेत्र पनि नापजाँच गरेर भाडा उठाउने बताए पनि प्रक्रिया आपरदर्शी देखिएको भन्दै मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
करिब १० रोपनी क्षेत्र रेस्टुरेन्टले प्रयोग गर्न लागेको कम्पनीसँग मासिक अढाइ लाख रुपैयाा लिने गरी सम्झौता भएको छ । खाली क्षेत्र उपयोग गर्न दिएर थप शुलक लिने दावी समितिको छ । त्यसअनुसार पनि नारायणहिटीको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५० हजार रुपैयाँमा भाडामा लाग्ने अवस्था छ । खाली जग्गा र सटर नभेटिने दरबारमार्ग क्षेत्रमा यो भाडादर निकै सस्तो हो ।
यसभन्दा अघि के के गरे प्रेम आलेले ?
केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा प्रेम आले वन मन्त्री थिए । ससंद विघटन पश्चात् भएको मन्त्री बिस्तार कार्यक्रम अन्र्तगत आले पुनः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका हुन् । आले वन मन्त्री रहँदा एक मन्त्व्यमा कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनको अर्थ बताइरहँदा नियमको तालमेल नमिलेपछि उनी एकाएक सञ्चारमा माध्यममा छाएका थिए । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेपछि भने उनले गरेका ब्याक टु ब्याक कामलाई आम जनताले साथ र सहयोग दिइरहेको पाइन्छ । एक हठी स्वभावका मन्त्री भनेर उनलाई अहिले आम जनताले चिन्न थालेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेपछि उनले गरेका केही महत्वपूर्ण काम यसप्रकार रहेका छन् ।
१. तीन महिना भित्र भैरहवा विमानस्थल उद्घाटन सान्तवना
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आगामी तीन महिना भित्र गौतमबुद्ध विमानस्थल उद्घाटन गर्ने घोषणा गरेका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २३ औं वार्षिकोत्सबका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो घोषणा गरेको थिए । भैरहवा रुट दिन भारतले आनाकानी गरेको भन्दै यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याइने उनले बताए। जनवरी २०२२ भित्र क्यालिब्रेसन उडान गर्ने तयारी रहेको समेत प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । मन्त्री आलेले तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्ने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । उनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए ।
२. सीईओ रेग्मीप्रति मन्त्री आलेको आक्रोश
रक्सीको निहुँमा विवादमा तानिएका पर्यटन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मीप्रति मन्त्री आलेले आफ्नो आका्रेश पोखेका थिए । उनले यस्ता मान्छे रहे भने बोर्डले काम गर्न नसक्ने समेत संज्ञा दिएका थिए ।
३. नेवानिले दुबईमा सातामा दुई उडान थप
नेपाल एयरलाइन्सले दुबईमा सातामा उडान संख्या थप गरेको उपलक्ष्यमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले केक काटेका थिए । दुबईमा यसअघि हरेक दिन एक÷एक वटा उडान भइरहेकोमा आइतबारबाट थप दुई (आइतबार र बुधबार) उडान हुने भएको थियो । नेपाल एयरलाइन्सका अनुसार थपिएको उडानका दौरान यात्रुलाई शुभकामना र कर्मचारीलाई हौसला दिन पर्यटनमन्त्री आले विमानस्थल पुगेको थिए ।
४.त्रिभुवन विमानस्थलको आवागमन कक्ष फराकिलो बनाउन निर्देशन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फको आवागमन कक्ष विस्तार तथा फराकिलो बनाउन निर्देशन दिएका थिए । भैरहवा जाने क्रममा विमानस्थलको निरीक्षण अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री आलेले आन्तरिकतर्फको विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको र कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उक्त आवागमन कक्षलाई फराकिलो ठाउँमा निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
५.त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निशुल्क बस सेवा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा यात्रुवाहक बस सेवा सुरु भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले माइक्रो बस यात्रा गरेर शुभारम्भ गरेका हुन् । आन्तरिक टर्मिनलबाट गोल्डेन गेटसम्म निशुल्क माइक्रो बस सेवा सुरु गरिएको हो। मन्त्री आलेले यात्रुवाहक माइक्रोबसको रिवन काटेर उद्घाटन गरेका थिए । निःशुल्क बस सेवासँगै विमानस्थलमा यात्रुको विश्रामस्थलको पनि शुभारम्भ भएको छ ।
वास्तवमा अहिले नेपाली जनताले जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि छिटोछरितो निदेर्शन र जवाफ खोजिरहेको छ । मन्त्री आलेले कुरालाई तत्काल निर्णय लिने भएकाले पनि उनी आजकाल जनताको वाहवाहीमा रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति : २६ पुस २०७८, सोमबार ६ : १४ बजे